Ny topi-maso faharoa an'ny Android N dia efa misy | Androidsis
Araka ny natoron'i Google rehefa namoaka ny topi-maso Android N voalohany dia hanana izany isika fanavaozana iray isam-bolana mandra-pahatongany tamin'ny endriny farany tamin'ny fahavaratra. Android N izay tonga hamaritana indray ny atao hoe Marshmallow ary mametraka ny famaranana momba ny rafitra fandidiana ho an'ny finday Google amin'izao fotoana izao.
Androany dia natombok'i Google ny Android N topi-maso faharoa avy amin'ny tranokalan'ny mpamorona misy sary avy amin'ny orinasa. Midika izany fa izay manana Nexus amin'ny Android N dia afaka mahazo fanavaozana OTA mandritra ny andro vitsivitsy.
Ny kinova vaovao dia tonga miaraka amin'ny laharana fananganana NPC91K ary azo alaina ho an'ny Nexus 5X, 6P, 6, 9, 9 LTE ​​ary Pixel C. Fampivoarana misy amin'ny fotoana rehetra ho an'izay te hanandrana ny sasany amin'ireo fiasa vaovao amin'ny Android, satria tsy ilaina ny mandray anjara amin'ny beta rehetra.
Ity no fanavaozana faharoa an'ny teo aloha avy amin'ny mpamorona, ary ny voalohany dia tonga efa ho iray volana lasa izay. Google dia namoaka antsipiriany vitsivitsy momba an'ity fanavaozana ity ny API rendering Vulkan 3D, hitsin-dàlana ao amin'ny mpandefa ary andiana emojis (Unicode) vaovao.
Ity andiana kinova vaovao an'ny teo aloha ity dia natao indrindra ho an'ny milamina ny sisin'ny Android N izay mbola manana volana vitsivitsy sisa tavela eo amin'ny endriny farany. Mety misy vaovao ary esorina mihitsy aza ny sasany amin'ireo fiasa izay nangoninay tamin'ny fotoana namoahana ny kinova voalohany.
Manana an'ity fidirana ity ianao hahafantatra ireo fiasa miavaka indrindra, ity iray ity ho an'ny specialities izay hita tao amin'ny iray teo aloha ary farany miaraka amin'ny ny vaovao kely. raha tsy fantatray ny tena anarany Android N, mandeha any amin'ny Google I / O 2016 izahay amin'izay hahafantaranay ny tohin'ny fampahalalana momba an'ity kinova vaovao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Google dia namoaka ny Android N Preview 2 ho an'ny fitaovana Nexus